The Mandalay City Development Committee is the administrative body of Mandalay which has wide-ranging responsibilities, ...
The Mandalay City Development Committee is the administrative body of Mandalay which has wide-ranging responsibilities, including city planning, land administration, tax collection, and urban development. MCDC raises its own revenues through tax collection, fees, licenses and property development.
Projects are being carried out in all sectors with the three objectives;
These objectives are being implemented by the following 14 departments of MCDC.
(1) Administration Department
(2)Motor Transport & Workshop Department
(3)Market and Slaughter House Department
(5) Revenue Department
(7)Playgrounds, Parks and Gardens Department
(8)Building and Central Stores Department
(9)Roads and Bridges Department
(10)Water and Sanitation Department
(11)Urban Planning and Land Administration Department
(12)Public Relations and Information Department
(14)Agriculture and Livestock Breeding Department
Myanmar Water Portal Mandalay City Development Committee (MCDC)
NLD အစိုးရလက်ထက် စည်ပင်လုပ်ငန်းများ စွမ်းအားပြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ၄နှစ်ခွဲတာကာလအတွင်း ဝယ်ယူစုဆောင်းခဲ့တဲ့ စက်ရုံ ၅ ရုံနဲ့ ယာဥ်စက်ယန္တရား စုစု​ပေါင်း ၃၉၆ စီး။......
တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲက တစ်ခု •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၁၂၈လမ်း ဂျပန်မြောင်း precast ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်နေမှု စစ်ဆေး......
စည်ပင်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ကျုံးရေသွင်းမြောင်းကို ၆ပေ precast channel ဖြင့်အဆင့်မြှင့် တည်ဆောက်။ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ရေအရင်းအမြစ်အနေနဲ့ ကျုံးရေက......
လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်းတွေမှာ Mandalay Smart Pay နဲ့ပေးချေလို့ရပါပြီ။
ငွေစက္ကူကနေတဆင့် ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ပါ။
Mandalay Smart Payကို အောက်က link လေးကနေတစ်ဆင့် install လုပ်လိုက်ပါ။
Download Link: https://www.mandalaysmartpay.com/download/
"Smart Pay ဖြင့် Smart...
"Smart Pay ဖြင့် Smart ကျကျပေးချေကြရအောင်"
လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်းတွေမှာ Mandalay Smart Pay နဲ့ပေးချေလို့ရပါပြီ။ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ငွေစက္ကူကနေတဆင့် ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ပါ။ Mandalay Smart Payကို အောက်က......
၆၂လမ်း မနော်ရမ္မံဟစ်တိုင်ကွင်း အဆင့်မြင့် လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်းဖွင့်လှစ်
မြို့တော်အတွက် ၁၀ခုမြောက် အဆင့်မြင့်သန့်စင်ခန်းပါ။
မန္တလေးစည်ပင် စံနှုန်းအတိုင်း လက်ဆေးကန်၊ ဆပ်ပြာရည်၊ လက်အခြောက်ခံစက်၊ အမျိုးသားဆီးကန် နဲ့ ရေဆွဲတာအားလုံး sensors တွေနဲ့ပါ။
Sensor တွေ ကြာရှည်ခံအောင် ရေသန့်စင်စနစ် filters...
Sensor တွေ ကြာရှည်ခံအောင် ရေသန့်စင်စနစ် filters တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ငွေရပြေစာကို handheld POS terminal with printer နဲ့ ထုတ်ပေးမှာဖြစ်လို့ စာရင်းအတိအကျထွက်ဖို့ အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ ပြေစာတောင်းယူစေချင်ပါတယ်။
Scan လုပ်ပြီး Mandalay Smart Pay MSP နဲ့လည်းပေးချေလို့ရတော့ အနုတ်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးပေါ့။
၆၂လမ်း မနော်ရမ္မံဟစ်တိုင်ကွင်း အဆင့်မြင့် လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်းဖွင့်လှစ် •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• မြို့တော်အတွက် ၁၀ခုမြောက် အဆင့်မြင့်သန့်စင်ခန်းပါ။ မန္တလေးစည်ပင် စံနှုန်းအတိုင်း......
Precast မြောင်းများတည်ဆောက်ရာမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများ ဆွေးနွေး
Precast မြောင်းတွေက အုတ်စီမြောင်းတွေထက် အားသာချက်အများကြီးပါ။
Precast Drain bed က concrete ဖြစ်လို့
ရေစီးဆင်းမှုပိုကောင်းတဲ့အတွက် မိုးရေကိုချက်ချင်း drain လုပ်နိုင်လို့ ​ရေမြန်မြန်ကျခြင်း၊
မြောင်းတွင်းအနည်ထိုင်မှုမရှိသလောက်နည်းလို့ မြောင်းဆယ်ဖို့ သိပ်မလိုခြင်း၊
တည်ဆောက်ဆဲ မိုးရွာလာရင်တားထားတဲ့တုတ်တွေဖွင့်လို့ရလို့ မိုးတွင်းကာလမှာတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊
အနာဂတ်မှာ drainage capacity ပိုလိုအပ်လာရင် ဖြုတ်ပြီး အခြားတစ်နေရာမှာပြန်သုံးနိုင်ခြင်း၊
ဒါပေမယ့်လည်း မြို့ရဲ့ infrastructures တွေဖြစ်တဲ့ လမ်းတွေ မြောင်းတွေမပါသေးပဲ မြို့ကွက်သစ်တွေချခဲ့ကြလို့ တိုက်တွေအိမ်တွေဆောက်ပြီးမှ လမ်းတွေ မြောင်းတွေ ပြန်လုပ်ရတဲ့ အနေအထားမှာ drainage plan ဆွဲရတာ ခက်ခဲပါတယ်။
တိုက်တွေကလည်း plinth level တွေ မြှင့်ထားကြတော့ မြောင်း level နဲ့ ကွာဟမှုတွေရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခုကို ရရှိဖြေရှင်းနိုင်အောင် လမ်းတံတားဌာန အင်ဂျင်နီယာများနဲ့အတူ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ပြီး ရုံးမှာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် အဖြေရှာခဲ့ပါတယ်။
မှားခဲ့လွဲခဲ့တာတွေကို ပြန်တည့်မတ်အောင် နဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
မြို့တော်တိုးတက်ဖို့ Precast မြောင်းများတည်ဆောက်ရာမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများ ဆွေးနွေး •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Precast မြောင်းတွေက အုတ်စီမြောင်းတွေထက်......
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ဂျပန်မြောင်း နှင့် နန်းရှေ့ ရေနီမြောင်း precast ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်နေမှု စစ်ဆေး
ဂျပန်မြောင်း ၅၁လမ်း နှင့် လမ်း ၆၀ ကြားကို တစ်ပေအရွယ် precast ကနေ ၂ပေ၊ ၃ပေ နဲ့ ၄ ပေအရွယ်အစားတွေနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်နေပါတယ်။
Catchment area နဲ့ drainage demand ပေါ်မူတည်ပြီး အရွယ်အစားကို သေးရာကနေ...
Catchment area နဲ့ drainage demand ပေါ်မူတည်ပြီး အရွယ်အစားကို သေးရာကနေ ကြီးပေးရတာပါ။
နန်းရှေ့ ရေနီမြောင်းလုပ်ငန်းက ရေစစ်ကန်နားရောက်နေပါပြီ။ ၆ ပေ precast မြောင်းတွေပါ။
လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ရေဆိုးမြောင်းအကြီးတွေကို တစ်နှစ်ချင်း အဆင့်မြှင့်တင်သွားပါမယ်။
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ဂျပန်မြောင်း နှင့် နန်းရှေ့ ရေနီမြောင်း precast ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်နေမှု စစ်ဆေး ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ဂျပန်မြောင်း ၅၁လမ်း နှင့် လမ်း ၆၀ ကြားကို......
အဆင့်မြင့် လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်း ၂ ခုဖွင့်လှစ်
၇၃လမ်း ၁၁လမ်း ၁၂လမ်းကြားနှင့် ၈၆လမ်း ၄၀-၄၁လမ်းကြား မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။
မြို့တော်အတွက် တည်ဆောက်ပြီးတာ ၉ခု ရှိသွားပါပြီ။
အဆင့်မြင့် လမ်းဘေးသန့်စင်ခန်း ၂ ခုဖွင့်လှစ် •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ၇၃လမ်း ၁၁လမ်း ၁၂လမ်းကြားနှင့် ၈၆လမ်း ၄၀-၄၁လမ်းကြား မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ မြို့တော်အတွက် တည်ဆောက်ပြီးတာ ၉ခု......
ကျန်တန်း ပွဲတော်အင်းရေများ အမြန်ဆုံးပြန်ကျရေး ရေထွက်ပေါက် ပိတ်ဆို့နေသောဗေဒါများဖယ်ရှား၊ ကွန်ကရိကျိုး
ရေကျပြီးတင်ကျန်နေတဲ့ အမှိုက်များနဲ့ ဖော့ဘူးများ ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်း။
မနေ့ညနေက စစ်ဆေးခဲ့တာကို မနက်ကထဲက အကောင်အထည်ဖော်နေတာပါ။
ရေအမြန်ဆုံးပြန်ကျရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေး •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• တာရိုးကျိုးလို့ရေဝင်နေရဲ့ ကျန်တန်း ပွဲတော်အင်းရေများ အမြန်ဆုံးပြန်ကျရေး ရေထွက်ပေါက် ပိတ်ဆို့နေသောဗေဒါများဖယ်ရှား၊......
Myanmar Water Portal postedanew blog post in Mandalay City Development Committee (MCDC)
​Start Date ​​End Date ​​Budget ​​Funding ​01/12/2016​ ​22/12/2019 ​ ​2500000 €	​ ​AFD, Agence française de développement (AFD)	​ The project aims at...
​Start Date ​​End Date ​​Budget ​​Funding ​01/12/2016​ ​22/12/2019 ​ ​2500000 €	​ ​AFD, Agence française de développement (AFD)	​ The project aims at providing access to water to 2,000 households of Mandalay City (Amarapura Township) and at implementing incentive measures for households to connect to the networks. It also consist...
​Major Cities of Myanmar face great challenges to deliver high quality basic services to their citizens while urbanization is at an early but growing stage. While...
​Major Cities of Myanmar face great challenges to deliver high quality basic services to their citizens while urbanization is at an early but growing stage. While this urbanization process is closely linked to economic development, its effects on health can be contradictory. The urbanization of Myanmar should therefore be compensated by important e...